Xeeladaha suuqgeynta badanaa waxaa loogu talagalay in la helo dheeraad ah hogaamiya ama kor u qaada macaamiisha hadda jirta. Mid ka mid ah arrimaha aan inta badan ka helno macaamiisha ayaa ah inay inta badan ka shaqeeyaan dhamaadka khaldan ee masafka iibka. Shirkado badan ayaa soo booqdayaashu ka yaryihiin bishii degelkooda intay doonayeen… laakiin hadday awoodaan inay laba jibbaaraan tirada booqdayaashaas ay haystaan, aad bay u guuleysan lahaayeen.
Farsamooyin badan oo aan la shaqeyno waxaa loo dhisay si loo soo gaabiyo waqtiga loo baahan yahay si loogu beddelo dhagaystayaasha la bartilmaameedsaday ama loo kordhiyo heerka beddelaadda dhibic kasta oo uu qulqulaya qulqulaya. Marwalba waan layaabaa inaan ugu yeerno funnel really runtii waa wax badan oo colander ah oo leh rajo weyn oo meel walba ka daadanaysa. Halkii aad ka shaqeyn lahayd dusha sare ee masraxa isla markaana aad wadid horseedyo badan godad ka buuxan godad, xaggee farsamada uga faa'iideysan kartaa qolka?
Maamulayaasha shabakada aaladaha waxay bixiyaan macluumaad muhiim ah si ay kaaga caawiyaan inaad kordhiso qiimaha gujinaya-makiinadaha raadinta. Waxaad durbaba fiiro gaar ah u leedahay inta raadinta taraafikada ay keeneyso bartaada, laakiin ma ogtahay waxa gujiska illaa heerka uu ku yaal qiimeyntaada hadda? Ma la horumarin karaa?
Meelaha sahaminta internetka sida SurveyMonkey (oo soo iibsaday macmiilkayaga, Zoomerang) ayaa ku siin kara caqliga loo baahan yahay si aad si mug leh loogu hagaajiyo istiraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabaha aad ka kooban tahay. Markaad hagaajiso waxyaabahaaga, waxaad awood u leedahay inaad si kalsooni leh u bartilmaameedsato raadinta helitaanka iyo inaad hubiso in macaamiishaada si habboon loogu adeego.
Soo jeedinta barnaamijka codsiyada sida Tinderbox waxay kuu oggolaanayaan inaad hagaajiso oo aad hagaajiso hannaanka soo-jeedintaada. Raadinta jawaabahaaga iyo fahamka sida loo hagaajiyo soo jeedintaada, waxaad awoodi kartaa inaad waddo beddelaad si dhakhso leh oo waxtar leh… dhammaan adoo adeegsanaya ilaha gudaha.
Markaad eegto Meheraddaada Iibinta, meeye xeeladihiina dejinta? Halkii aad isku dayi lahayd inaad kaxeyso dhagaystayaal aad iyo aad u badan, waxaa macquul ah inaadan ka faa'iideysan macaamiisha iyo rajooyinka aad horey u laheyd. Waa u qalantaa fiirin!